अष्ट्रेलिया विशेषः ट्याक्स अफिस र इमिग्रेशन डिपार्टमेन्टबीचको सम्बन्ध
आइतबार, २२ आषाढ, २०७६
अष्ट्रेलियन ट्याक्सेसन अफिस र इमिग्रेशन डिपार्टमेन्टले आफ्ना ग्राहकहरूको सूचना एकअर्कामा बाँड्ने र गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यहोराका समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बेला बेलामा प्रसारण हुने गरेका छन् । स्टुडेन्ट, ४५७ आदि अस्थायी भिषामा भएका साथीहरूबाट यस विषयमा थुप्रै जिज्ञासाहरू पनि आएका छन् । यो छोटो लेख तिनै जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने प्रयास हो ।
सूचना कसरी शेयर हुन्छ ?
इमिग्रेशन डिपार्ट्मेन्ट र ट्याक्स अफिस दुवैले अत्याधुनिक सफ्ट्वेयरहरू प्रयोग गर्ने हुनाले उनीहरूसँग आफ्ना ग्राहकका विवरणहरू अद्यावधिक रहेका हुन्छन् । यस्तो विवरण उनीहरूले चाहेको बेलामा कपी गरेर अर्को निकायलाई पनि दिन सकिने सुविधा रहन्छ । दुवै सरकारी निकाय भएकाले उनीहरूलाई आफ्ना ग्राहकका सूचना अर्को निकायलाई दिन धेरै कानुनी व्यवधान पनि छैन । अस्थायी भिषामा भएका विदेशीहरूको विवरण इमिग्रेशन डिपार्टमेन्टले ट्याक्स अफिसलाई दिन सक्छ । यसरी प्राप्त भएको सूचनालाई ट्याक्स अफिसले आफूसँग भएको सूचनासँग दाँजेर हेर्दछ र कुनै किसिमको अस्वभाविक नतिजा देखिएमा त्यसको छानविन सुरु गर्न सक्दछ । उसले पाएको सूचनाको आधारमा कसैले आफ्नो भिषाको शर्त उल्लङ्घन गरेको देखेमा उसले इमिग्रेशन डिपार्ट्मेन्टलाई खबर गर्न सक्दछ ।
एउटा उदाहरण हेरौँ । रामलाई उसको अफिसले ४५७ भिषाको लागि स्पोन्सर गरिदिएको छ र ऊ गएको २ वर्षदेखि ४५७ भिषामा काम गरिरहेको छ । यो साल ट्याक्स रिटर्न गर्दा उसको आम्दानी ३० हजार डलर मात्र देखिएको छ । यो ४५७ भिषामा भएकाहरूलाई दिइनुपर्ने न्यूनतम तलबभन्दा निकै कम हो । इमिग्रेशन डिपार्ट्मेन्टले दिएको सूचनाको आधारमा अब ट्याक्स अफिसलाई उसको भिषा क्लासको बारेमा थाहा हुनसक्छ र उसले आम्दानी किन कम देखाएको भन्ने बारेमा छानविन हुनसक्छ । एकातिर ट्याक्स अफिसले आफूले पाउनुपर्ने कर उठाउनको लागि प्रयास सुरु गर्दछ भने अर्कातिर यदि उसले यो सूचना इमिग्रेशनलाई दिएमा रामको भिषा नै संकटमा पर्नसक्छ । यो एउटा काल्पनिक उदाहरण मात्र हो, तर यो बाहेक अन्य धेरै अवस्थामा डाटा शेयरिङ्गबाट गलत काम गर्नेहरू पत्ता लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छन् ।
हुँदै नभएको नक्कली श्रीमतीको नाम राखेर अघिल्ला वर्षहरूमा धेरै ट्याक्स रिटर्न गरेकाहरूले स्वदेश फर्केर सक्कली विवाह गरी श्रीमतीको भिषाको लागि आवेदन दिँदा इमिग्रेशनले स्पष्टीकरण मागेका धेरै उदाहरणहरू छन् ।
गैरकानुनी हैसियतका कामदारलाई काम लगाउने रोजगारदातालाई के हुन्छ ?
गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदार मात्र होइन, उसलाई काम दिने रोजगारदातालाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यवसाय गरेको व्यक्तिले गैरकानुनी हैसियतको कामदारलाई रोजगारी दिएको पत्ता लागेमा उसलाई ठूलो रकम जरिवाना हुनाको साथै जेल सजायसमेत हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
कारबाहीबाट बच्न के गर्ने त ?
विगत केही वर्षको अवधिमा गरिएको डाटा शेयरिङ्गबाट विभिन्न अस्थायी भिषामा भएकाहरूले ट्याक्स अफिसलाई ढाँटेको वा भिषा शर्त विपरीत काम गरेको नतिजा निस्केकाले यस प्रक्रियालाई यी दुवै निकायले भविष्यमा पनि निरन्तरता दिने सम्भावना छ । ट्याक्स अफिस र इमिग्रेशन डिपार्ट्मेन्टले गर्नसक्ने कारबाहीबाट सजिलै बच्न सकिन्छ । आफ्नो अकाउण्टेन्टसँग सल्लाह गरेर हरेक वर्ष आफ्नो ट्याक्स रिटर्न इमान्दारीसाथ गरेमा ट्याक्स अफिसबाट जोगिन सकिन्छ । त्यस्तै, आफ्नो भिषाका शर्तहरू उल्लङ्घन नगरी काम गरेमा इमिग्रेशन डिपार्ट्मेन्टले पनि कुनै कारबाही गर्ने सम्भावना नै रहन्न ।
(यस स्तम्भमा दिइएका जानकारी पूर्ण, अद्यावधिक र सबैका लागि उपयुक्त नहुन सक्छन् । कुनै निष्कर्षमा पुग्नु वा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अध्यागमन विभागको वेबसाइट, माइग्रेशनसम्बन्धी परामर्श दिने वकिल वा रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेन्टबाट आवश्यक जानकारी लिनु उचित हुन्छ । लेखक रजिष्टर्ड माइग्रेशन एजेन्ट -MARN 1172267_ हुन् । तपाईंका पनि कुनै जिज्ञासा छन् भने news@nepalipatra.com मा पठाउन सक्नुहुन्छ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ ।)